China Tsika Dombo-VNS-1308DCB Kugadzira uye Fekitori | LONGSHAN
Tsika Dombo-VN ...
1. Zviri nyore kuiswa, uye nepasi p ...
Kune ichi chigadzirwa tinodaidzawo kuti chando chena pa ...
Ndicho chimwe chechigadzirwa chakakurumbira mu sto ...
Izvi zvakasikwa slate ledger mapaneru ane dee ...
Ichi chigadzirwa chine multicolor, chinotaridzika chaizvo ...
Chinhu It .:VNS-1308DCB
Item Zita: Nhema Quartz Wall Cladding Mapepa Matete
Saizi:100X360MM / 100X350MM / 100X400MM
Kurema: 27KG / M2
1. Zviri nyore kuiswa, uye nemutengo wakachipa. Iyi yakajeka nhema nhema yetsika ibwe iri nyore kwazvo mechi pamwe nerimwe ruvara. Gadzira dhizaini yako izere neiri rinoshamisa dombo rechisiki
2. Kurema kwacho kwakareruka kupfuura zvimwe zvigadzirwa. zviri nyore kutakura uye kuvaka.
3. Wide mitsara yezvigadzirwa zvine akasiyana masitaera uye saizi. Tinogona kugamuchira chero zvigadzirwa zvakagadzirwa nematombo, sekureba sekunge mutengi achipa chero dhizaini nemifananidzo kana madhirowa, isu isu tinogona kupa vatengi zvigadzirwa.
4. Iyo yakasarudzika yepamusoro inopa akasiyana akasiyana magadzirirwo, akasiyana mavara uye magadzirirwo haatungamire kune zvisingaenderane mapatani. Muchokwadi, izvi zvinongowedzera runako rwezvidhina zvemaslate, nekuti zvinounza vanhu manzwiro akasiyana.
Izvo zvigadzirwa zvinogona kushandiswa zvakanyanya mune yega dzimba uye zvemabhizimusi mapurojekiti mune yekunze neyekunze kushongedza, pamwe neakakura mativi, nzira yekugadzika uye kugadzirisa nzvimbo mabasa.Mavara eiyo tsika dombo nderechisikigo uye akaisvonaka. kuratidza kunzwa kwekudzokera kune zvakasikwa
1. Nei uchitisarudza?
a. Fekitori yedu yakapasa kuongororwa kweBV, mhedzisiro iri padanho B.
b. ISO9001: 2015 Chitupa
c. Isu tine timu yehunyanzvi yekudzora timu, yedu QC ichanyatso kuongorora kubva kune yakasvibirira zvigadzirwa kune akapedza zvigadzirwa chidimbu nechidimbu.
c. Fekitori yedu yanga iri yekupa ADEO, KINGFISHER, RONA, OBI uye HOMEDEPOT kwemakore mazhinji.
2. Vangani vashandi mufekitori yako?
Fekitori yedu ine 99 vashandi
3. Ndeipi chiteshi chekutakura?
4. Ndeipi nguva yekuendesa?
Kazhinji mazuva gumi nemashanu anogona kupedzisa mudziyo mumwe mushure mekugashira dhipoziti.
Iyo yenguva yekurongedza ndeye 12pcs / bhokisi, 112boxes / pallet, 20pallets / container.we zvakare tinogona kuenderana nechikumbiro chako kurongedza.
Pashure: Tsika Dombo-VNS-1308HGCB
Zvadaro: Akasununguka / Random Dombo-VNS-1120LS